Iinkonzo - iMestech Industrial Limited
Njengeshishini lokuvelisa ngobuchwephesha, i-MESTECH ayiboneleli ngeemveliso kuphela, kodwa ikwabonelela ngezisombululo kunye neenkonzo ezizonke ezijikelezayo. Ezi nkonzo zibandakanya iimveliso zeplastiki, iimveliso zehardware yoyilo kunye nemveliso, iinxalenye ekubunjweni, emva kokuqhubekeka, uyilo lwemveliso kunye nendibano, isibhengezo sesiko lokuthumela kwelinye ilizwe kunye neminye imiba.
Ukwenza umngundo kunye nenaliti Ukubumba
IMESTECH inenkqubo epheleleyo yokuvelisa ukungunda kweplastiki. Ngaphezulu kwezibini ezingama-300 zokubumba zeplastiki zenziwe ngonyaka, kwaye ukubumba ngenaliti kunye nokulungiswa kwemveliso yeplastiki kwenziwa. Umgangatho wokubumba yi-HASCO, i-DEM, i-MISUMI ne-CHINA. Ukongeza ukuhlangana abathengi kulo mmandla, ngumngundo zethu kwakhona zithunyelwa eYurophu, North America kunye Asia kunye namanye amazwe kunye nemimandla.
Izinyithi eziqinileyo zinendawo yokunyibilika ephezulu, ubulukhuni kunye namandla, ukuqhuba, ukungasebenzi kakuhle kunye nobukhazikhazi besinyithi kunezinye izinto. Ngokuhlengahlengisa ukwakheka kwangaphakathi kunye nolwakhiwo lweemolekyuli zesinyithi, sinokufumana iipropathi ezingaphezulu kakhulu kunezo zeplastikhi kunye nezinye izinto ezingesosinyithi
Ingxubevange yesinyithi ebalaseleyo kunye neendawo ezichanekileyo eziphezulu ziyafumaneka. Ke ngoko, iinxalenye zesinyithi zisetyenziswa kakhulu koomatshini nakwizixhobo, ishishini leekhemikhali, ukubhabha ngenqwelomoya, ukuhamba ngenqwelomoya, ukuhamba ngenqanawa, ukuhambisa, ukukhanyisa, unyango kunye nombane.
Isinyithi esisetyenziswa rhoqo sisinyithi, ialuminium ingxubevange, zinc ingxubevange, ubhedu, ingxubevange yobhedu kunye titanium ingxubevange. Iindlela zokuqhubekeka kweendawo ezenziwe ngazo zahlukile ngenxa yezakhiwo zazo ezahlukeneyo, ukwenziwa kunye nokusetyenziswa. Ukongeza ukunyibilikisa isinyithi, ezona teknoloji ziphambili zokwenza ubuchwephesha esizisebenzisayo ukufumana ubungakanani bokugqibela kunye nokumila kwesinyithi zezi: ukulahla izinto ngomgubo, ukugoba umgubo kunye nokuchaka.
Ngokuphuhliswa kwetekhnoloji ye-Intanethi kunye nokuvela kwetekhnoloji entsha yemveliso, ukuhlaziywa kweemveliso ezintsha kwintengiso yanamhlanje kuyakhawuleza kwaye kuyakhawuleza. Uyivumela njani imveliso yakho ukuba ingene kwintengiso ngelona xesha lifutshane sisitshixo kukhuphiswano lwamashishini. Iinkampani ezininzi zihlala zinikezela ngezixhobo zangaphandle ukuba zigqibe ezinye okanye uninzi lomsebenzi woyilo lweemveliso, ukwenzela ukunciphisa umjikelo wophuhliso lweemveliso, kwaye zijolise ekusebenzeni kweemarike nakwizinto eziphambili.
Iinjineli zeMestech zinokubonelela ngamalungu eplastiki, izixhobo zehardware kunye noyilo lobume bemveliso, uhlalutyo lokujonga imeko, kunye nokulandelwa kokuveliswa komngundo, iinxalenye zemveliso kunye neenkonzo zomhlangano ezigqityiweyo ngokweemfuno zabathengi.
Imveliso entsha ukusukela ekuqaleni koyilo ukuya kwimveliso kunye nentengiso, ihlala ifuna ukutyala imali eninzi, amandla kunye nexesha. Umgangatho woyilo lwemveliso ngokuthe ngqo umisela impumelelo yemveliso. Iprototype yindlela ebalulekileyo yokuvavanya uyilo lwemveliso. Isetyenziselwa ukukhangela iingxaki ezikhoyo kuyilo lwemveliso, ukuphucula uyilo, kwaye kuthintelwe iimpazamo ezinkulu ezikhokelela kwilahleko enkulu kwinqanaba elilandelayo. Umzekelo, iimoto, iinqwelomoya, iinqanawa kunye neemveliso zombane kunye nezombane, iiprototypes zihlala zenzelwa ukuqinisekisa ngaphambi kokuveliswa ngokusemthethweni komngundo kunye neenxalenye.
I-Mestech iyakwazi ukubonelela abathengi nge-CNC, ukushicilelwa kwe-3D kwamalungu eplastiki kunye namalungu esinyithi kunye nemodeli eyenziwe ngesandla ye-SLA, kunye nemveliso encinci yesampulu.
Kukho amawakawaka eemarike, ezihlala zihlaziywa mihla le. Ukhuphiswano kwimarike luya lusiba mandundu. Iinkampani ziyahluka ngokobukhulu. Iinkampani ezininzi, ezinikwe umda lishishini, zijolise kuyilo kunye nophuhliso lweemarike okanye iimveliso zetekhnoloji entsha, kwaye azimiseli imveliso yazo yokuhlanganisa.
Sinokubonelela ngendibano yemveliso kunye nenkxaso yezobuchwephesha kubathengi abanjalo. Ibandakanya uthotho lweenkonzo zokumisa-nye ezinje ngoyilo lwemveliso, imveliso yamalungu, ukuthengwa kwempahla kunye nendibano.
Ukubonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu kunye neemveliso zokubumba zeplastikhi, i-die-casting kunye ne-machining yenye yeenjongo eziphambili ze-MESTECH. Ngezixhobo zethu ezibalaseleyo kunye namaziko, sikwanalo neqela leenjineli ezinamava kunye nabasebenzi abanezakhono. Siqinisekisa umgangatho weemveliso zethu kunye neenkonzo ngokuqhubeka kokuphuculwa kwetekhnoloji ephezulu kunye nobuchule, kunye nolungelelwaniso olungqongqo kunye nolawulo.
Ukuveliswa kwemveliso kuhlala kubandakanya uthotho lweetyathanga ezinxulumene noko. Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabathengi, sinikezela ngeenkonzo zokujikajika kuyilo lokuqala, uphuhliso, ukwenziwa kwindibano yemveliso. Unokufumana ngakumbi malunga nenye ingezantsi okanye kungenjalo, qhagamshelana nathi ukuze sixoxe ngeemfuno zakho.